मलेसियामा सबै कामदारको न्यूनतम तलब RM 1500 कहिलेबाट हुन्छ लागु, हेर्नुस् ! - ramechhapkhabar.com
मलेसियामा सबै कामदारको न्यूनतम तलब RM 1500 कहिलेबाट हुन्छ लागु, हेर्नुस् !
मलेशियन ट्रेड युनियन कंग्रेस (MTUC) ले हालको आर्थिक अवस्थालाई थप सान्दर्भिक बनाउन रु.१,२०० को न्यूनतम पारिश्रमिक रु.१,५०० पुर्याउनुपर्ने माग गरेको छ। यस सम्बन्धमा MTUC ले राष्ट्रिय तलब परामर्श परिषद् मार्फत मानव संशाधन मन्त्रालयमा बृद्धिको प्रस्ताव पत्र पठाएको छ ।
नतिजाको रूपमा, त्यहाँ निजामती कर्मचारीहरू छन् जसले परिवारको आवश्यकता पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सुनिश्चित गर्न मात्र दुईवटा काम गर्नुपर्छ। वर्तमान अवस्था र आर्थिक स्तरअनुसार प्रत्येक २ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिकको इफेन्डी अध्ययन गरिनुपर्छ ।
केही नेपालीले विदेशबाट भरिया भएर सुन ल्याउने गर्दा सबैलाई समस्यामा पार्यो…
विदेशबाट फर्किनेहरूले ल्याउने गरेको ५० ग्राम सुनको बालालाई उनले समातेर भन्सार महसुल तिराउने निर्णय गरेका छन् । यो निर्णयका कारण विदेशमा बस्ने नेपालीहरु नेपाल सरकारसँग चिढिएका छन् । मंसिर १३ (सोमबार) देखि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विदेशबाट फर्किनेहरूले ल्याएको बालामा भन्सार शुल्क लिन थालेको छ । सोमबार यता करिब ६४ किलो सुन सङ्कलन गरिएको छ । १ हजार १५७ जनाले भन्सार तिरेर सुन लगेका छन् ।
यता त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासकमा सह–सचिव महेश भट्टराईले भने यस्तो भन्छन् –
– विदेशबाट भरिया भएर आउनेहरुको कथा सुन्दा अत्यन्त दर्दनाक छ । नेपाल आउन जब विमानस्थल पुगेर बोर्डिङ पास लिन्छन्, त्यसपछि त्यहाँ अ”वैध सुन कारोवार गर्नेहरुको विचौलिया पुग्छ ।
उसले ‘एउटा बाला लगिदेऊ, त्यो बापत नेपाल गएर मैले भनेको व्यक्तिलाई सुन दिएपछि ५ देखि ७ हजार दिन्छ’ भन्ने रहेछन् । कतिपयले फन्दामा परिन्छ भनेर अस्वीकार गर्दा रहेछन्, कतिपयले चाहिँ पकेटमनि आउँछ भनेर ‘हुन्छ’ भन्दा रहेछन् ।
अर्को चाखलाग्दो कुरा ‘तिमीलाई विमानस्थलमा कोही लिन आउँछ, उसले तिमीलाई ट्याक्सीबाट सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउँछ । एक रात खान र बस्न व्यवस्था गर्छ,’ भनेर थप लोभ देखाउँदा रहेछन् ।
भरियाले प्रलोभनमा परेर स्वीकारेपछि हुलियाको फोटो र पासपोर्ट खिच्दारहेछन् । त्यसपछि त्यो व्यक्तिको फोटो र पासपोर्ट काठमाडौंमा पठाउँदारहेछन् रिसिभरलाई ।
जसले अर्काको सामान बोकेर आउँछ, तिनको हकमा अलि संवेदनशील छ । हाम्रो अनुसन्धानमा के देखिएको छ भने ५० ग्राम अर्काको सुन लिएर आउनेहरूले यहाँ डिपोजिट गरेर बाहिर जान्छन् । सुनको वास्तविक लगानीकर्ताले पैसा दिएपछि बल्ल भन्सार तिरेर जाँचपास गरेर लान्छन् ।
ऊ नेपाल आएपछि पार्किङमा ‘म लिन आएको’ भनेर रिसिभ गरेर लाँदा रहेछन् । उसले सुन बुझाएपछि दुई लेयर पार गरेर असली कारोबारीसम्म सुन पुग्दोरहेछ । यस्तो ठूलो जालो रहेछ । पठाउने र पाउनेको बीचमा ३ देखि ५ तहसम्मको लेयर छ भन्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।